Uma uthi nhlá, umsebenzi copywriter futhi rewriter, cishe okufanayo, kodwa akunjalo. Ukufana yalezi ukuzibonakalisa ukuthi okushiwo rewriter umsebenzi kanye copywriter ukubhala izihloko. Copywriter noma ekhetha ingqikithi ngokubhala isihloko bese esihlokweni udalula ukudayiswa kwi exchange stock, noma wabhala isihloko ngaphansi ukuze ulidayisela ikhasimende. Izihloko avame ukuba yokukhangisa ngokwemvelo noma ukuthengisa imibhalo. Ngu uqobo, umsebenzi copywriter akuyona kuyinkimbinkimbi, kodwa kuletha engenayo ehloniphekile njalo, ngenxa yokuthi imibhalo copywriter kwezimpahla ithengiswe, futhi ngenxa yalokho wenze nenzuzo. Ukuze ukukhangisa kwezimpahla noma amasevisi ukuba siphumelele copywriter kufanele uqaphele, ukuze bakwazi ukuqonda Psychology zabantu, kufanele ukwazi ukubheka into emehlweni umthengi. Uma empilweni une isipiliyoni ngokubhala izihloko nganoma yisiphi abezindaba, kulula ukusingatha umsebenzi nakuyi-Internet.
Umsebenzi copywriter ingenye vdiov umsebenzi ualennoy ukuthi outsourced kalula. Uma udinga outsource nezabasebenzi eYekaterinburg futhi ufuna ukuthola izinsizakalo eziyikhwalithi, xhumana mompaniyu VENTRA.
umsebenzi reraytery kuyehla kube esiyingqayizivele kabusha lokubhala lwezihloko esedlule oyenzile. Ngokuvamile, athikili lelandzisako ngokwemvelo. Kanye rewriter copywriter ongasebenza noma ngesicelo noma uwedwa ne kabusha alandelayo sihloko phezu exchange. umsebenzi reraytery kudinga ukunakekelwa, njengoba umthetho, izobhalela umbhalo esiyingqayizivele, reraytery kufanele uhlaziye ulwazi oluningi silitadishe futhi sihlaziye
Ukusebenza njengoba copywriter futhi rewriter, ungakwazi ukubala ngeholo ehloniphekile. Ngakho copywriter bangathola kusuka 300dol kufika ku- $ 400 lapho besanda kuqala umsebenzi, futhi imali ye copywriters abanolwazi lingafika ayizinkulungwane eziningana zamadola ngenyanga. Rewriter ngomsebenzi wabo amukele $ 2 kuya $ 10 ngamunye izinhlamvu eziyinkulungwane. Kodwa le miphumela bungatholakala, kokuba kakade nakho, futhi lokhu, kudingeka senze okusemandleni amancane isikhathi esiningi ekugcineni ukukhombisa zonke izimfanelo babo bomsebenzi futhi ube ochwepheshe esisemqoka ngempela ikhokhwe. Futhi ekuqaleni, kungase kudingeke ulandele noma engenayo ingasaphathwa, kodwa kungaba isifiso, nakho konke okunye kuzolandela.
Ukuze usebenze njengoba copywriter noma rewriter kudinga ulwazi oluthile namakhono. Okokuqala, wokwazi imithetho yolimi kanye miyalelo, ikhono ukuba baveze abakucabangayo lucidly futhi ngamafuphi, ukuze babe nolwazi Psychology womuntu kuzinga eziyisisekelo, bakwazi ukusingatha futhi bahlele esiningi ulwazi ukuze bakwazi lokumba okushiwo mayelana nodaba noma ngesihloko.
Uma ungenakho okuhlangenwe nakho copywriter, kodwa uthanda lo msebenzi, kungenzeka ukuthi uqale ube rewriter kanye ngenyanga noma ezimbili noma ezintathu, ungazama wena njengomphathi copywriter.
Jobe eMoscow eminyakeni engu-17, noma ubani ukusebenza umfundi
LLC "SGC-Truboprovodstroy-5": ukubuyekezwa izisebenzi zale nkampani
Groomer - ubani lo? Kuyini lokhu mkhakha?
Kungani kunjalo ziphoqa umsizi Umdabuli?
Umsebenzi Excavator: izici umsebenzi, imisebenzi, inkokhelo
Jobe ku Ufa - kungcono ngempela
Casserole nge inkukhu webele: izithako, ongakhetha ukupheka
Ikhekhe 'Iresi ka-Bird' iresiphi yokupheka ekhaya
Yamadivayisi izinto ezingadingekile
"Inglourious Basterds": nabalingisi izindima, sakhiwo, amaqiniso athakazelisayo
Ukhilimu omuncu ngokuba ubuso imibimbi
Ubhiya Puer itiye kwesokudla?
Izikhulumi Wireless kukhompyutha yakho
Boer - lokhu ... Diamond sokuprakthiza. auger isikulufa